Vagadziri veMafirimu Akatarisana Plywood & Fancy Plywood- Roc
Firimu rakatarisana neplywood
OSB (Yakatemerwa Strand Board)
WDC / HDF
HPL Fireproof Bhodhi
Imba Uye Kunze Sevhisi
FILM YAKATarisana NEMAHARA
OSB (YAKADZIDZWA STAND BHODI)
Dzimba / Kombiji Inoshandiswa
Kubudirira kwedu kwemhando dzose dzehuni huni ndeye 1,000,000m3 gore rega. Akazvipira kuburitsa uye kutumira kunze kwemhando yepamusoro zvigadzirwa mufirimu yakatarisana neplywood, fancy plywood, antiskid plywood, MDF, OSB uye LVL zvigadzirwa.
Seye anotungamira kugadzira uye whsaler weplywood, MDF, OSB uye LVL, isu takazvipira kuve pamberi pehunyanzvi uye mhando. ichienderera mberi nekuvandudza nzvimbo dzese dzepaneru redu rehuni. Kugovera kwedu kwakadzikama kunobatsira iwe kuwana chinzvimbo chakasimba mumusika wepasi rose uye kunova nechokwadi chekukura kwenguva refu.
OSB (Kutarisana netambo bhodhi)
Export Kusvikira Dtae
VANOGADZIRA DZIMWEWO ZVINOGONESESA ZVINOGONESESA NEZVINHU
ROCPLEX Kutsvaga Agent Services
Ndichiri kunetsekana nezve zvekuvakisa kutsvaga kubva kuChina? Ipapo chingave chisarudzo chehungwaru kuti iwe utisarudze. Inoratidzirwa neiyo imwe yekumira yekutenga masevhisi, ROCPLEX inoita kuti iwe ugone kubva kuChina nenzira isingatarisirwe asi inoshamisa nzira.
Pazasi pane ZVAKABATSIRA iwe unogona kunakidzwa…
Hofisi yekumhiri kwemakungwa
Yakanaka kutenga dhipatimendi uye yemhando yekudzora dhipatimendi, uyezve, nyanzvi mutengesi. Saka ROCPLEX iva nechivimbo chakakwana kuve dhipatimendi rako rekutenga kune dzimwe nyika rakavimbika. Makore makumi maviri nemashanu emabhizinesi emhuri emiti isu ngativei nechivimbo chekuita basa rakanaka mukuvaka zvigadzirwa zvigadzirwa zvinotenga mumiriri.
ROC International, Inovimbika yekungenisa uye kutumira kambani, ine makore makumi maviri nemashanu ezviitiko mukutamisa uye kutumira kunze agency sevhisi. ROC wepasi rose nyanzvi mune zvigadzirwa zvehuni, Kunyanya mubhodhi rehuni bhizinesi. Makore makumi maviri nemashanu emapuranga ekugadzira uye kutumira kunze kwakarima timu yehunyanzvi muhuni zvigadzirwa kupinza uye kutumira kunze uye kuongorora kwehunhu.
Kirasi kupinza uye kutumira kunze bhizinesi mutsika, ine yakanakisa tsika clearance yekumhanyisa uye kugona, yakatsiga uye yakakura timu yekushanda, ichikupa iwe yakanakisa uye inofungidzira kupinza uye yekunze agency basa.
Imba Yenyika Boka ndiye mugadziri mukuru uye mutengesi weplywood uye nezvimwe zvigadzirwa muChina, iyo yakavambwa muna1993 ine 6 subsidiaries. Isu tave kunakidzwa makumi manomwe nenomwe ekugadzira mitsara yefirimu yakatarisana neplywood fancy plywood uye LVL. Uye gumi nembiri yakabatana-stock kambani muOSB, MDF uye melamine board inogadzira.
ROC International ndeyekunze uye kutumira kambani kambani muImba World Group.
Kubudirira kwedu kwemhando dzose dzehuni huni ndeye 1,000,000m3 gore rega. Yakashongedzerwa nemachina mazhinji epamberi, eItaly IMEAS sanders, maJapan UROKO peeling michina, Veneer Joint Tenderizers nemashini makuru akaoma, kambani yakazvipira kugadzira uye kutumira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro mufirimu rakatarisana neplywood, fancy plywood, antiskid plywood, MDF, OSB uye zvigadzirwa zveLVL.
Nei ROCPLEX kuongorora kuri nani
Tine nyanzvi yemhando yekutarisa timu mumatanda bhodhi zvinhu.
Makore makumi maviri nemashanu ekugadzira uye kuongorora chiitiko muplywood, MDF, OSB, melamine board, zvigadzirwa zveLVL.
100% Yakanaka, nyanzvi uye yakaoma.
100% Nyanzvi dzinoongorora.
inovhara nzvimbo dzeChina dzemabhizimusi.
Isu tinopa akanakisa masevhisi.
Nyaya yenyaya yekuongorora mukati memaawa gumi nemaviri mushure mekuongororwa.
Tine mutengo wakanakisa.
Anopfuura makore makumi maviri emakore ruzivo rwezvigadzirwa zvehuni mapaneru vatengi veOEM.
Kubva ipapo, boka redu reOEM pane mapaneru munzvimbo dzinopfuura makumi mashanu mumakondinendi mashanu.
OEM / ODM mirairo inogamuchirwa. Tine mukana mukuru muR & D, tsika yakagadzirwa nematanda bhodhi zvigadzirwa kunyanya pane plywood uye melamine bhodhi.
Nemakore mazhinji eruzivo mukushanda pamwe nevatengi vedu kubva pasirese, isu tinoonekwa seyakavimbika yehukama naye nekuda kwenzvimbo yechiitiko uye hunyanzvi hunopihwa mukuvandudza, dhizaini uye rutsigiro rwekutengesa rwezvigadzirwa zvavo.
Zvigadzirwa zvepamba pamba
Kero: Senso Center, Pizhou Guta, Jiangsu Dunhu, China